Su'aalaha La Weydiiyo - Gaobeidian PRISES Biotechnology Co., Ltd.
Xirmada Tijaabada COVID-19
Qalabka Imtixaanka Taranka
Qalabka Baaritaanka Cudurrada faafa
Tube Muunad Sambal (VTM)
Haa, waxaan ku bixin karnaa dukumiintiyada badankood oo ay ku jiraan Shahaadooyinka Falanqaynta / Waxqabadka; Caymis; Asalka, iyo dukumiintiyada kale ee dhoofinta halka looga baahdo.
Shaybaarrada, waqtiga hoggaamintu waa qiyaastii 7 maalmood. Soosaarka ballaaran, waqtiga hogaamintu waa 20-30 maalmood kadib helitaanka lacagta deebaajiga. Waqtiyada hogaamintu waxay dhaqan galayaan marka (1) aan helno deebaajigaaga, iyo (2) waxaan helnay ogolaanshahaaga ugu dambeeya ee alaabadaada. Haddii waqtiyadayada hogaamintu aysan ku shaqeyneynin waqtigaaga ugu dambeeya, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku dayi doonnaa in aan meel dhigno baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Bixinta waxaa lagu bixin karaa koontadayada bangiga, Western Union, PayPal ama Alibaba Trade Inusrance. Muddada lacag-bixinta waxay kuxirantahay duruufaha jira.
Ma dammaanad qaadaysaa inaad alaab ammaan ah oo ammaan ah la soo gaarsiiyo?
Qiimaha dhoofintu waxay kuxirantahay habka aad dooratay inaad alaabta ku hesho. Express sida caadiga ah waa habka ugu dhaqsaha badan laakiin sidoo kale ugu qaalisan. Xeerarka badda waa xalka ugu fiican ee qaddarka badan. Si sax ah sicirka xamuulka waxaan ku siin karnaa oo keliya haddii aan ogaanno faahfaahinta xaddiga, miisaanka iyo habka. Fadlan nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Ma bixin kartaa adeegyada OEM？
Awood u habeynta casriga ah ee shuruudahaaga gaarka ah, adeegyada OEM / ODM / OBM.